Myanmar Unicode Issue — MYSTERY ZILLION
Myanmar Unicode Issue
ကျတော် ယူနီကုတ် သုံးပြီး မြန်မာ သတင်းဆိုက် ရေးမလို့ လုပ် နေတာပါ။<br>ကျတော် Codeigniter framework ကို သုံးမလို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကျတော် database မလုပ်ခင်မှာ ယူနီကုတ် support ဖြစ်အောင် database မှာ ဘာ တွေများ ပြင်စင်ထားစရာလိုလဲသိချင်လို့ပါ။<br><br>MYSTERY ZILLION လည်း ကျတော်ရှိမှာ တချို့ စာတွေ ဖတ်လို့မရပါဘူး။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲသီချင်လို့ပါ။ <br><br>
I cant see myanmar font property in dropdown list and and some button on Mystery Zillion.<br>Here is screen shot<br><br>http://img199.imageshack.us/i/screenshoottwo.png/<br><br>Thanks<br&gt;
Rich Text တွေထဲမှာလည်း ယူနီကုဒ်နဲ့ ရိုက်လို့မရသေးဘူး စေတန်အဲဒါတွေ
ပြန်စစ်ရဦးမယ် အပေါ်ကတစ်ယောက် ပြောထားတဲ့ Button တွေ လည်းပြန်စစ်ပါဦး
Oh ! Yes .. I need to fix that issue. Now , I will fix when I arrive home
@kaungthuwin database ကို utf8_general_ci ထားထားပါ။ CodeIgniter ကို အသုံးပြုရင်တော့ utf8 အတွက် ကြေငြာစရာမလိုဘူး ထင်ရပေမယ့် သေချာအောင် query မှာ <br> SET NAMES 'utf8'; ဆိုပြီး run ထားပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ css မှာ font-family ကို masterpiece uni sans, yunghkio တို့ကို ကြေငြာထားဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ font embed ကိုတော့ http://mywebfont.appspot.com ကနေ ယူလို့ရပါတယ်။<br>
I think some layout are out of bound <br><br>http://img854.imageshack.us/i/outofbound.jpg/<br&gt;
@Morris , အင်း .. BBCode ကို vanilla က fully support မလုပ်လို့ ဖြစ်နေတာ။
ဟုတ်ကဲ့ အကိုရေ ကျေးဇူးပါပဲ။ အကိုရေ အီးမေး notification ထည့်ပေးထားရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။<br>ကိုယ် ဆွေးနွေး ထား တဲ့ တော့ပစ် လေးတွေ update ဖြစ်ရင် အီးမေး လေး ပို့ပေး ရင်းကောင်းမယ်။ အကြံပေးတာပါ။<br><br>ကျေးဇူး<br>
sorry, i got it.. i found it on setting. Thanks, pls ignore my comment.<br>
Do you any idea of to put dropdown font changer like saturngod blog's comment .. allow user select keyboard layout for unicode. I just want to implement this on normal textbox and textarea. people are very used to use zaw gyi keyboard layout.